“Waxaan leeyahay qof kasta oo Somali ah oo meeshaa loo magacaabo, hadii uu hawsha loo igmaday ka bixi karo, xaq buu u leeyahay” M/weynaha Puntland. – Radio Daljir
“Waxaan leeyahay qof kasta oo Somali ah oo meeshaa loo magacaabo, hadii uu hawsha loo igmaday ka bixi karo, xaq buu u leeyahay” M/weynaha Puntland.
Oktoobar 16, 2010 12:00 b 0
Garowe, Oct 16 – M/weynaha dawlada Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa sheegay in dawlada Puntland ay soo dhawaynayso magacaabida R/wasaaraha cusub ee xukuumada federaalka ah.
“Waxaan leeyahay qof kasta oo Somali ah oo meeshaa loo magacaabo, hadii uu hawsha loo igmaday ka bixi karo, xaq buu u leeyahay in loo magacaabo” ayuu yiri M/weyne Faroole.
M/weyne Faroole waxaa uu sheegay in dawlada Puntland ay ayidsan tahay axdigii 2004-tii ee tiir-dhexaadka u ahaa dhismaha dawlada federaalka ah, ayna tahay in siyaasada dawlada federaalku in ka duusho axdigaas, go’aamada madaxdeeduna ay noqdaan kuwa kaa ku salaysan.
Waxaa uu ugu baaqay R/wasaaraha cusub iyo dawlada federaalku in ay ka shaqeeyaan dhaqan gelinta heshiiskii Galkacyo ee Ogosto 2009, iyo kii Nairobi ee Abril 2010.
Waxaa uu dhaliilay hannaanka awood-qaybsiga beelaha ee 4.5 oo uu ku tilmaamay mid aan cadaalad ku salaysnayn, ayna tahay in la badelo.
Waxaa uu sheegay in ay jiraan dacaayado laga fidiyey Puntland oo sheegaya in Puntland aysan taageeray dawlada, taas oo uu ku tilmaamay wax aan jirin.
“Waxaa jira dad mansab doon ah oo magaca Puntland adeegsada” ayaa uu yiri mar uu ka hadlay warar sheegaya in Puntland aanay taageeri doonin dawlada federaalka ah, haddii R/wasaaruhu aanu ka soo jeedin Puntland.
Waxaa uu intaas ku daray in Puntland aan lagala tashan magacaabida R/wasaraaha, balse ay taasi ahayd mid u tiil M/weynaha iyo ciddii uu kalsooni ku qabay ee uu kala tashaday, wixii eed ah oo ka yimaadana ay iyagu mas’uuliyadeeda leeyiiin.
Waxaa uu ku baaqay iskaashi dhex mara Puntland iyo dawlada federaalka ah, wixii khilaaf ahna in lagu dhameeyo wadatashi iyo is-faham.
R/wasaraha cusub-na waxaa uu ugu baaqay in uu ka feejignaado u nuglaanta garabyada siyaasadeed ee Somaliya, iyo in aanu noqon nin dugaalsada garab siyaasadeed.
Waxaa uu xusay in ay lama huraan tahay hirgelinta dastuurka cusub ee dawlada federaalka ah ee kala astaynaya awoodaha dawlada federaalka ah iyo kuwa dawlad goboleedyada.
M/weyne Faroole waxaa uu u waramay idaacada BBC-da.
Halkan ka dhegayso waraysiga …
Maxkamada darajada 1-aad ee Bossaso oo xukuntay eedaysanayaal lagu soo oogay samaynta, beeca & istcimaalka mukhaadaraadka.